सुडानमा आम निर्वाचनको घोषणा, सेनाको गोली लागि ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु ! | नेपालबहस
दक्षिण अफ्रिकामा गैंडाको चोरीशिकारीमा कठोर कदम
दशैँमा घरपोत्ने रातो माटो : प्रतिबोरा रु ६० देखि ८० !
आज १० अर्बको टे«जरी बिल बिक्री गरिँदै
नशा रहित समाज नेपाललाई सिटिजन्स बैंकको आर्थिक सहयोग
जनता बैंकले गर्यो झण्डै एक अर्ब बराबरको बोनस तथा लाभांश घोषणा
सहुलियतपूर्ण कर्जामा व्याज अनुदान सम्बन्धि सेञ्चुरी बैंककाे वित्तीय साक्षरता अभियान
यसपटक अदुवाको उचित मूल्य पाएपछि कृषक पनि हर्षित
दशैको बस टिकट लाईनमा होइन अनलाईनमा
सुपथ मूल्य पसलले उपभोक्तालाई राहत
स्याउले ३५–५० मूल्य पाउन पनि हम्मेहम्मे, कृषक मर्कामा
चाँडपर्वलाई लक्षित गरी सीमामा नेपाल–भारतको संयुक्त सहायता कक्ष
चाडपर्वमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
दाजुलाई खुकुरी प्रहार गरी भाइले गरे आत्महत्या, घाइतेको अवस्था गम्भीर !
राष्ट्रपतिको बोलीले निम्त्याएको सकस
मधेशी जनताको कथा, गाथा र ब्यथा
वर्तमान संविधानले राष्ट्रियताको भावना कति बढायो ?
संविधान वेद, कुरान, बाइबल हाेइन जाे संशाेधन नै गर्न नसकियाेस्
रवि ओडको नयाँ गीत सार्वजनिक
स्क्रब टाइफसका कारण मृत्युदर घट्दै, सङ्क्रमण बढ्दै
बढी शुल्क लिएको भए फिर्ता देऊ : त्रिविवि
भाइरलका कारण विद्यालय बन्द, तत्काल स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने तयारी !
स्थानीयस्तरमा खेलाडी उत्पादनका लागि फुटबल प्रतियोगिता
विश्व पर्यटन दिवसमा फुटसल
नेपालले माल्दिभ्ससँग बराबरी खेल्यो
फिफा नयाँ वरियतामा नेपालको ५ स्थान सुधार !
जुन 4, 2019
खार्तुम । सुडानको सत्तारुढ सैनिक परिषदले प्रदर्शनकारीसँग यसअघि भएको सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता भङ्ग गरी नौ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सुडानको राजधानी खार्तुमस्थित सैनिक मुख्यालय बाहिर सेनाले चलाएको गोली लागि ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको भोलिपल्टै सेनाले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । सुडानको सेनाप्रमुख अब्देल फताह अल–बुरहानले टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा निर्वाचन गराइने बताए ।
सैनिक शासनविरुद्ध प्रदर्शनकारी सैनिक मुख्यालय बाहिर र शहरका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र वरपर महिनौंदेखि अवरोध खडा गरेर धर्नामा बसेका थिए । धर्नामा बसेका प्रदर्शनकारीलाई हटाउनेक्रममा सेनाले सोमबार गोली चलाएको हो । प्रदर्शन स्थलमा लगातार बन्दुक पड्किएको आवाज आएको पनि एएफपीका पत्रकारले जनाएका छन् ।
आन्दोलनका कारण राजधानी खार्तुमका सबैजसो क्षेत्रमा मेसिनगन जडान गरिएका ठूलो सङ््ख्यामा सैनिक ट्रकसहितको टोलीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिका र बेलायतले प्रदर्शनकारीमाथिको दमनलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
यी दुवै मुलुकले नागरिकलाई शान्तिपूर्णरूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । सुडानको प्रभावशाली नागरिक संस्था चिकित्सकहरूको केन्द्रीय टोलीले मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएको छ ।
सुडानी प्रफेसनल एशोसिएशन ‘एसपीए’ले सेनाले “नागरिकको आमहत्या” गरेको आरोप लगाउँदै सैनिक शासनलाई पूर्णरूपमा असफल तुल्याउन “नागरिक अवज्ञा” आन्दोलन गर्न आह्वान गरेको छ । एसपिएले सैनिक सत्तासँग तत्काल वार्ता सम्भव नरहेको बताएको छ ।
सेनाको वर्तमान नेतृत्वले सेनाकै सहयोगमा ३० वर्ष शासन गरेका राष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई केही महिना अगाडि सत्ताच्यूत गरेर सत्ता आफैँले लिएको थियो । सेना र प्रदर्शनकारीबीच नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सर्तसहितको सहमति भए पनि सत्ता हस्तान्तरण नभएकाले आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।
अघिल्लो लेखबन्दका दिनमा पनि सांग्रिला बैंक खुल्ला रहनेछ (हेर्नुहोस् समयतालिका)
अर्को लेखजापानमा ६.१ म्याग्नीच्युडको भूकम्प !
गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण
सुडानमा कर्फ्यु अवज्ञा, सैनिक नेतृत्व अस्वीकार्य
सेप्टेम्बर 23, 2019